Gịnị ka anyị kwesịrị ị attentiona ntị n'ubu anyị?
Akpịrị olu bụ akụkụ dị mkpa nke ahụ mmadụ. Anyị enweghị ike ịrụ ọrụ ma zuo ike na-enweghị ya kwa ụbọchị. Dịka otu n'ime njikọ dị mkpa nke ahụ mmadụ, ubu na-agagharị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge niile. Ahụ ike ya na-ekpebi ndụ mmadụ na ogo ndụ ya kpọmkwem. Iji ezigbo Sho ...
Oge mgbụsị akwụkwọ bụ oge owuwe ihe ubi dị mma. Ọ bụkwa oge dị elu maka ọrịa. Otutu oria na adighi ike iweghachi n'oge mgbụsị akwụkwọ. Dị ka ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ si kwuo, n'ihi mmetụta nke ihu igwe na ihe ndị ọzọ, ndapụta nke ịda mbà n'obi na ọrịa uche ndị ọzọ n'oge mgbụsị akwụkwọ amụbawo nke ukwuu. T ...
Ndị enyi na-enwe mmasị igwu egwuregwu tenis, badminton na ịkụ tennis ga-emerụ ha n’aka mgbe ha na-agba bọọlụ, tụmadị mgbe ha na-egwu egwu. Ndị ọkachamara na-agwa anyị na nke a ka a na-akpọkarị "nkwonkwo tennis". Egwuregwu tennis a kachasị na oge ịkụ bọl, nkwojiaka nkwonkwo abụghị b ...
Fitness echebe gia
N'ime usoro ahụ ike, ọ dịịrị anyị mfe ịkpata nrụgide akwara na akwara n'ihi mgbatị oke. Mgbe nsogbu akwara na akwara na-eme, anyị ga-enwe ihe mgbu. Ọ bụ ezie na mmega ahụ dị mma maka ahụ ike anyị, ọ pụtara mmega ahụ kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na anyị anaghị etinye ezigbo anya na usoro nke ...
N’oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri n’oge afọ ọ bụla, oge ọkọchị, bụ nnukwu nsogbu ọghọm ọkụ. Ọ dị mfe ịkpalite ọkụ na egwu nchekwa nke ndụ na ihe onwunwe ndị mmadụ. Na Febrụwarị 20, anyị haziri ndị ọrụ anyị ka ha mepụta ọzụzụ ihe ọmụma gbasara ọkụ. F ...
Banyere nchedo ukwu
Uche n'úkwù na-arụ ọrụ na-arịwanye elu n'izere mmerụ egwuregwu na imeziwanye egwuregwu. Uwe ukwu, dị ka isi ihe dị mkpa nke ọtụtụ egwuregwu, kwesịrị ka anyị lebara anya. N'ime usoro mmega ahụ na egwuregwu, a na-etinye akwa ukwu n'ike, ma tinye aka na traini ...
Ọrụ nke ohiri isi olu na otu esi belata ihe mgbu nke olu
Ndị ọrụ na-acha ọcha na-acha ọcha nke oge a na-agbada isi ha ruo ogologo oge, nke ga-eme ka akwara dị n'olu n'azụ na-agwụ ike gabiga ókè, ma na-agbanye ike ndọda niile na ọkpụkpụ nke cervical vertebrae. Mgbe ogologo oge gachara, ọ ga - eme ka diski cervical vertebrae pụta, na - eme ...
7 njirimara nwanyi nchedo nwanyi
Nkwado Lumbar na-arịwanye elu na ụmụ nwanyị na-anọkarị jụụ, n'ihi na ụmụ nwanyị nwere nsọ nwanyị, afọ ime, ịmụ nwa, inye ara ara na njirimara ndị ọzọ, yana nwee njirimara nke ọrịa ụmụ nwanyị, yabụ obere ihe mgbu bụ ihe mgbaàmà nkịtị. Yabụ otu esi echekwa akwa anyị ...
Fọdụ ndị mmadụ na-eche na mmemme ụtụtụ kwesiri ka eme ya dị ka o kwere mee, ya mere ha na-enwe mmasị ịpụga ahụ tupu ụtụtụ n'ụtụtụ. N'ezie, ọ bụghị nke sayensị. Mgbe otu abalị gachara, ihe mmetọ na-agbakọba na ikuku, iku ume ikuku a emetọ ga-enwe mmetụta na-emerụ ahụ na ahụ mmadụ.
Egwuregwu oge oyi
N’obodo nke ugbua, ndu ndu na oru di oke osiso, ma aru mmadu no n’elu ibu n’elu ogologo oge. Dị ka a na-ekwu, "Ndụ dabeere na mmega ahụ." Egwuregwu ndị kwesịrị ekwesị na-arụ ọrụ dị mma n'ịkwalite ahụike mmadụ, egwuregwu ndị a na-enwe n'oge oyi pụkwara igosipụta ike nke ndị mmadụ ...
Jiri nkwojiaka aka kwesịrị ekwesị
Mkpụrụ aka bụ akụkụ kachasị arụ ọrụ nke ahụ anyị, yabụ ohere nke mmerụ ahụ dị oke elu. Yi Bracers nwere ike ichebe ya ka ọ ghara ịgbawa ma ọ bụ mee ka ọ gbakee ngwa ngwa. Nkwonkwo nkwonkwo abụrụla otu n'ime ihe ndị dị mkpa maka ndị egwuregwu na nkwado nkwojiaka ekwesịghị igbochi ọrụ nkịtị nke ...
Chedo ikpere gị mgbe ị na-eme egwuregwu
Na egwuregwu nke oge a, ojiji nke ikpere ikpere bụ nnọọ oke. Ikpere abụghị naanị akụkụ dị oke mkpa na egwuregwu, kamakwa ọ bụ akụkụ na-adịghị ike. Ọ bụkwa ihe na-egbu mgbu ma na-egbu oge mgbe ọnyá merụrụ ahụ, ọbụnakwa ụfọdụ ndị ga-enwe ihe mgbu na-agwụ ike n'oge mmiri ozuzo na igwe ojii. Ikpere ikpere B ...